WTM: Ndị Minista Summit nụrụ ka teknụzụ ọgbara ọhụrụ nwere ike isi nyere ọdịnala ime obodo aka
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » WTM: Ndị Minista Summit nụrụ ka teknụzụ ọgbara ọhụrụ nwere ike isi nyere ọdịnala ime obodo aka
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ dị iche iche
Mgbakọ ndị ozi WTM
Isi ụdị ụwa dịka Google na MasterCard nwere ike inyere ndị ọrụ ugbo, ndị na-ere ahịa na ndị na-eme ụlọ oriri na ọ restaụuraụ aka ịkwalite ime njem ime obodo, ndị nnọchi anya nụrụ taa na World Travel Market (WTM) London - ihe omume ebe echiche na-abata.
Ndi oru itumgbere ahia na ndi isi ulo oru na Nzukọ UNWTO & WTM Mgbakọ gbara ndị ozi na-ahụ maka njem nleta na gburugburu ụwa ume ka ha na ndị azụmahịa na-emekọrịta ihe iji nyere obodo ndị dị n'ime obodo aka.
Isiokwu nke nzukọ a na-eme kwa afọ bụ 'Teknụzụ maka mmepe ime obodo', ma ọ bụ ịtọ ntọala maka ọrụ ọzọ na 2020, mgbe 'mmepe ime obodo na njem nlegharị anya' ga-abụ isiokwu maka Tourbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2020 na 27th Septemba.
Diana Muñoz-Mendez, Senior VP, Global Tourism Partnerships at Mastercard, kwuru na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-enyere obere ime obodo azụmahịa - ugbo, ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ --ụ - iji were ego dijitalụ karịa iji ego, dị ka ọtụtụ ndị njem na-akwụ ụgwọ ugbu a na kaadị.
Ọnye na -bụ Ann Don Bosco?, Onye isi na-eto eto na Google, kwuru na nnukwu ụlọ ọrụ a zụọla mmadụ 120,000 na ime obodo Greek hotels iji mee ka teknụzụ kachasị, ma na-achọ ịgbasa atụmatụ ahụ na Japan na Kenya.
Atụmatụ ọzọ maka ndị ọrụ ugbo - n'oge a na Turkey - mere ka ọ pụta ìhè site na Debbie Hindle, Onye isi njikwa na Njem Anọ, onye kwuru, sị: “Ọ bụghị nanị ndị njem nlegharị anya ka ime njem ime obodo - uto nke Fethiye sitere na Travel Foundation gbara ndị ọrụ ugbo ume ka ha mepụta nri maka họtel ndị dị n’obodo ahụ, ma gwa ndị njem nleta banyere ya.
E gosipụtara ihe ọmụmụ ikpe ọzọ site na Ogige Santiago, Chief Executive na Teknụzụ Mabrian - nke ọkachamara na nyocha data njem.
O kwuru na otu netwọk nke obodo nketa na ime obodo Colombia nyere aka melite ahụmịhe maka ndị njem ma gbasaa ego site na njem karịa ebe ndị ọzọ na-ahụkarị na obodo. Gary Stewart, Onye isi nzụkọ ahịa Wayra UK, gosipụtara ebe ndị dị ka Sweden na Israel dị ka ezigbo ihe atụ nke ebe ndị na-adọrọ mmasị ndị nwere ego.
Ahmad al-Khatib, Onye isi oche nke Saudi Commission maka njem nleta na ihe nketa mba, gwara nzuko ahụ na Saudi Arabia nwere ebumnuche siri ike ịzụlite njem - mana ọ chọkwara ichebe ọdịnala na ọdịnala pụrụ iche nke ime obodo.
"Dịka ọmụmaatụ, ndị ọbịa Airbnb nwere ike ị nabata n'ime ime obodo ebe a na-enwebeghị ụlọ nkwari akụ," ka ọ gwara ndị ozi.
I nwere ike ịnọnyere ezinụlọ gị ma hụ otú ha si eri nri na ejiji. ”
N'ịbụ onye guzosiri ike dị ka nzukọ kachasị kwa afọ nke ndị ozi njem nleta, ndị na-eche echiche dị elu na-edozi ya Nina Dos Santos, Onye nchịkọta akụkọ Europe na CNN International.
Ọ kpọrọ ndị ozi njem njem site na Yemen, Guatemala, Panama, Albania, Bolivia, Colombia, Sierra Leone na Portugal ka ha kwuo maka mkpa ọ dị mmepe ime obodo iji kwado nkwado njem na akụnụba mba.
Ihe atụ nke ezigbo omume sitere na teknụzụ mkpanaka na Sierra Leone, na ụtụ isi maka ụlọ oriri na ọ Colomụ Colomụ Colombia, atụmatụ Wi-Fi na Portugal, okpete na ngwaahịa koko na Guatemala, na okpu agba na Panama.
eTN bụ onye mmekọ mgbasa ozi maka WTM London.